Oromoo Archives - Page 5 of 10 - Welcome to bilisummaa
OromoTV.com Contributor Jaafar Ali, Norway Irraa Afaan jechuun, akka saayinsiin afaanii barsiisu tti, waan biraa tokkollee osoo hintahin, mi’a qunnamtii ykn meeshaa ittiin waliigalan, kan …
In Ethiopia they live like animals, relentlessly persecuted, hunted down like games, killed at will and incarcerated en masse. No mercy is shown even to …
Hoogganummaa Daawuud Ibsaa, Dhugaasaa Bakakkoo fi Bultum Biyyoo irraay gonkuma bilisummaa Oromoo dhugoomsuun hin danda’amu
Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa kam irra jira? Guutuu Guraandhala 2015 Gaafii kana Oromoota heddutu gaafataa jira. Deebiin kennamaa jiruus, akkasuma hedduu dha. Walumaa galatti deebii …
Bofa afaa jalaa kan osoo hin beekin nama miidhu hedduu argaa jirra.
Najiib Zannuun irraa Waa’een saba keenyaa kun yeroo dubbatamu waan hedduutu nama ajaa’iba. Yeroo sabni keenya dammaqee wal dhagayuun sosossoo’ee gamtaan falmachaa jirutti, gufuun qabsoo …